↑ ၂.၀ ၂.၁ (in Danish) TV2Nyhederne – "Grønland går over til selvstyre" TV2Nyhederne (TV2News) – Ved overgangen til selvstyre, er grønlandsk nu det officielle sprog. Retrieved 22 January 2012.
↑ (in Danish) Law of Greenlandic Selfrule Archived 8 February 2012 at the Wayback Machine. (see chapter 7)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဂရင်းလန်ကျွန်း&oldid=647336" မှ ရယူရန်
၁၆ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၁၇:၅၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၆ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၁၇:၅၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။